Equipmentlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ | Ndị na-emepụta ọgwụ na ndị na-emepụta ọgwụ na China
WAS Series Ampoule Mmiri Sterilizer
Dị ka naanị mba R & D center maka disinfection & nwoke ịga ụlọ ọgwụ, SHINVA bụ isi drafting unit maka mba na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ maka nwoke ịga ụlọ ọgwụ. Ugbu a SHINVA bụ ụlọ ọrụ nrụpụta kasịnụ maka ịzụ ụmụ na ọgwụ disinfection na ụwa. SHINVA agafeela asambodo nke ISO9001, CE, ASME na sistemụ njikwa ụgbọ mmiri.
RXY Series Saa-Sterilaiz-Jupụta-Akara Line
A na-eji Ntanetị Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line saa ahụ, nwoke ịga ụlọ ọgwụ, mejupụta na ịdechi obere vial injection na ogbako. Ọ na atụmatụ elu imewe, ezi uche Ọdịdị, elu ogo akpaaka, mụ na a pụrụ ịdabere na ọrụ, elu mmepụta arụmọrụ na n'ibu na ọkụ mwekota. Akụkụ akpọtụrụ ya na mmiri ọgwụ na-eme nke AISI316L na nke ọzọ bụ nke AISI304. Ihe eji eme ihe enweghi mmetuta na ogwu.
PSMR Series Super-kpụ ọkụ n'ọnụ Water Sterilizer
Ihe nwere ike: Pụrụ iche maka ịwa ahụ robot ọrụ ogwe aka.
RXY Series Form-Jupụta-Akara Line
Mpempe akwụkwọ na-abụghị PVC ga-ejupụta-akara akara (FFS Line) bụ nke mejupụtara akpa akpa, ebe ntinye akara, njikwa kabinet na laminar gbagoro mkpuchi. Non-PVC -dị-Jupụta-Akara Machine. Igba chaatị dị ka ndị a: Printing on film → Bag form → Port welding → Bag ebufe transfer ndochi → Bag akara out Bag si-ndepụta
ECOJET Series Ọgwụ na ịkpụzi & ịfụ usoro
A na-ejikarị igwe eme ihe iji mee karama efu site na granule PP. Gụnyere Ọgwụ na ịkpụzi igwe na igwe na-afụ ụfụ.
SSL Series Saa-Jupụta-Akara igwe
A na-ejikarị igwe eme ihe maka ịsacha, njuju na akara nke ịmị kalama PP. Okwesiri maka ikpocha oku nke okpu agwakọtara, ọ gụnyere ion windlọ nhicha windo, WFI ịsa akwa, oge nrụgide na-ejupụta, akàrà / nkeji ihe.
PSMP Series Super-kpụ ọkụ n'ọnụ Water Sterilizer
GP usoro akpaaka usoro
Akpaka usoro na ike na akpaka iga na akpaka loading dị iche iche iche iche infusion, tree akpaka iga na akpaka ebutu mgbe nwoke ịga ụlọ ọgwụ, nke bụ ọhụrụ ọgbọ nke na-emepụta ọgwụ na ngwá.
PBM usoro BFS igwe
Igwe karama na-afụ-mejupụta akụrụngwa nakweere ịfụ-jupụta-akara (n'ọdịnihu BFS) teknụzụ jikọtara ya, nke bụ usoro mmepụta maka mmepụta nkwakọ ngwaahịa plastic. A na-eji igwe na-ejuputa ihe eji arụ ọrụ n'ime atọ n'ime mmepụta nke ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa plastik, ngwaahịa aseptic, wdg. , obere mmepụta na njikwa njikwa.
Dị ka naanị mba R&D center maka disinfection & nwoke ịga ụlọ ọgwụ akụrụngwa, SHINVA bụ isi drafting unit maka mba na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ maka nwoke ịga ụlọ ọgwụ akụrụngwa. Ugbu a SHINVA bụ ụlọ ọrụ nrụpụta kasịnụ maka ịkụ ọrụ na ọgwụ disinfection n'ụwa. SHINVA agafeela asambodo nke sistemụ mma ISO9001, CE, ASME na sistemụ njikwa arịa nrụgide.
SGL usoro igwe na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri zuru oke na-ezute ihe GMP chọrọ, a na-ejikwa ya maka nsị nke ngwaọrụ, uwe na-adịghị ọcha, roba na-akwụsị, mkpuchi aluminom, akụrụngwa, ihe nzacha na usoro ọdịnala na mpaghara nke injinia ọgwụ, ahụike na nlekọta ahụike, anụmanụ laabu na na.
GR Series akpaaka usoro
BZ Series Automatic ngwugwu usoro
A na-ejikọ sistemụ ngwugwu akpaka na nyocha ọkụ ọkụ, akpaka na-akpaka na akpaka palletizing nke ụdị dị iche iche, nke bụ ọgbọ ọhụụ nke ngwa ọgwụ. Ngwa nke sistemụ a abụghị naanị na-ebelata oke ọrụ iji belata ike ọrụ, kamakwa ọ na-eme ka ọkwa akpaaka nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa iji meziwanye onyonyo nke ụlọ ọrụ ọgwụ.